Nepal Auto | सबैको मन जित्नेमा ढुक्क छौं
सबैको मन जित्नेमा ढुक्क छौं 29 Bhadra, 2075
सवारी साधनको कुम्भ मेलाको रुपमा रहेको ‘नाडा अटो शो २०१८’ मा इटालियन मोटरसाइकल एसडब्लुएमका विभिन्न उत्पादन पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको छ ।
इटालियन कम्पनी एसडब्लुएमले सन् १९७१ देखि मोटरसाइकल उत्पादन थालेको थियो । एसडब्लुएम मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक ज्ञान अर्थमुर्भस प्रालि हो । कम्पनीका निर्देशक दीपेश श्रेष्ठसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
अटो शोमा एसडब्लुएम मोटरसाइकलको बारेमा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौं । मोटरसाइकलको लुक्सले पनि ग्राहकहरुको मन जित्न सफल भएको पाएका छौं । उहाँहरुले लक्स धेरै नै मन पराएको पायौं । उहाँहरुको प्रतिक्रियाबाट उत्साहित छौं । फरक बनावट र आकर्षक डिजाइनका कारण पनि यो कम्पनीका मोटरसाइकल लोकप्रिय छन् । नयाँ उत्पादन भएर पनि अवलोकनकर्ताहरुले निकै नै चासो राख्नु भएको छ ।
यहाँहरुले कुन कुन मोडलको मोटरसाइकल प्रर्दशनीमा राख्नु भएको छ ?
हामीले तीन मोडलको मोटरसाइकलहरु प्रर्दशनीमा राखेको छौं । ती सबै नयाँ हुन् । एसडब्लुएमका आरएस ३०० आर, सुपर ड्युअल ६५० टी र सिल्भर भेस ४४० का मोडल प्रर्दशनीमा राखेका छौं ।
मोटरसाइकलमा अफरहरु ल्याउनु भएको छ ?
नाडा अटो शोमा बुक गर्ने ग्राहकको लागि पचास हजार बराबरको छुट दिन्छौं ।
यसको बजार मुल्य कति राख्नु भएको छ ?
एसडब्लुएमका सुपर ड्युअल ६५० टीको २३ लाख, आरएस ३०० आरको मूल्य १६ लाख र सिल्भर भेस ४४० को मूल्य १४ लाख ५० हजार कायम गरिएको छ ।
नेपालमा नयाँ भए पनि अवलोकनकर्ताहरुबाट पाएको प्रतिक्रियाले केही गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास बढेको छ । सबै उमेर समूहलाई लक्षित गरेर ल्याएको हुँदा पनि सबैको मन जित्नेमा ढुक्क छौं ।